Sambatra ny manome am-pitiavana sy mitory fampihavanana marina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ezaka Noely 2014
Sambatra ny manome am-pitiavana sy mitory fampihavanana marina
Fanaon’ny Fiangonana any amin’ny paroasy ny manentana ny kristianina hanao “Ezaka Noely”, amin’ny fotoam-panomanana ny fiavian’ny Tompo, itodihana manokana amin’ireo mahantra. Ny tohin'ny lahatsoratra dia hitanao ao anatin'ny Lakroa laharana 3899, pejy faha 13, nivoaka alahady 21 desambra ary efa azonao jiafaina nanomboka ny alakamisy 18 desambra teo.
Fanaon’ny Fiangonana any amin’ny paroasy ny manentana ny kristianina hanao “Ezaka Noely”, amin’ny fotoam-panomanana ny fiavian’ny Tompo, itodihana manokana amin’ireo mahantra. Fampiharana ny fampianaran’i Jesoa rahateo ny fanaovana izany ary azo atao araka ny zava-misy amin’ny vanim-potoana. Fifampizarana.
Raisina eo am-baravaram-piangonana ny valopy natokana hanaovana “Ezaka Noely 2014”, miantefa amin’ireo kristianina tsy an-kanavaka. Fahita izany any anivon’ny paroasy maro. Vola atokana ho fikarakarana ny asa sosialy sahanin’ny paroasy. Itsinjovana manokana ireo mahantra. Fantatra anefa ny fahasahiranan’ny maro ankehitriny raha vao vola no resahina, manoloana ny fiatrehana ny vidim-piainana lafo noho ny kirizy maro lafy lalovan’ny firenena. Fa tsy izany akory no tsy hanaovana ny adidy aman’andraikitra eo amin’ny Fiangonana sy ny fiarahamonina. Ary tsy voatery ho vola ny fitodihana manokana amin’ny mahantra fa araka izay ananan’ny tena ihany. Ny Papa Frantsoa, ohatra, izay dimby manokan’ny apositoly Piera amin’ny fampitana ny fampianaran’i Jesoa, dia nanapa-kevitra ny hivarotra ireo fanomezana azony ho fanohanana ny asa fiantrana ataony. Anisan’izany ny fiarakodia sy moto nomen’olona azy. Ohatra faka tahaka izany ataon’ny Papa izany, izay fantatra ny fanetren-tenany. Mety ho azon’ny olom-boahosotra rehetra ampiharina ihany koa izany, ary hatramin’ny lahika aza: hanaovana asa fitiava-namana any anivon’ny fiarahamonina any. Mety tsy hitovy amin’ny any Roma ny zava-misy any anivon’ny diosezy isanisany fa azo atao izany, mba ho fanentanana ny kristianina amin’ny fandraisana anjara amin’ny asa fitiava-namana takian’ny fampianaran’i Jesoa. Hanairana ny tsirairay amin’ny antson’Andriamanitra hiara-hiasa aminy hahatanteraka ny famonjena ny olona, amin’ny alalan’ny finoana arahina asa.
Endrika maro amin’ny ezaka fifampizarana
Ny manome sy mizarazara fanomezana no fahitantsika isan-taona, ho an’ny kamboty, ho an’ny beantitra, ho an’ireo mahantra fadiranovana. Fanatanterahana ny fampianaran’i Jesoa izany araka ny nolazainy hoe : “Izay manana akanjo roa, aoka hizara amin’izay tsy manana; ary izay manan-kohanina, aoka hanao toy izany koa” (Lk 3, 11). Ary fiainana ny firahalahiana andidian’ny Tompo antsika ihany koa izany, araka ilay didim-pitiavana nomeny antsika hoe : “Aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa” (Jo 13, 34). “Ny manana no afaka manao toy izany”, hoy ny fanamarihana. Meteza anefa isika miteny toy izany hanokam-potoana fohy ka handinika lalina raha tena tsy manan-kozaraina tokoa.
Jereo ny zavatra ao an-dalimoara na ao am-bata ao. Azo inoana fa tsy maintsy misy ihany ao zavatra efa tsy ampiasainao intsony kanefa mety hahasoa ny hafa tsy manana. Hitondra hafaliana na ho an’ny mandray azy na ho anao manolotra izany.
Endrika iray amin’ny fifampizarana Noely ihany koa ny famangiana ny marary na ireo olona manirery any anivon’ny fianakaviana na fiarahamonina any. Mila olona hifampiresaka aminy izy ireny. Ho fankaherezana azy amin’ny aretim-batana na aretin-tsaina amam-panahy mitambesatra aminy. Hitondra hafaliana ho azy ireny koa izany.
Eo izany rehetra izany, fa ny “Ezaka Noely 2014” raha ny zava-misy eto amin’ny firenena, dia anisany ny fampihavanana izay mihasimba sy tsy voahaja eny anivon’ny fiarahamonina. Potika ny firaisan-kina, manjaka ny fizarazarana eo amin’ny mpiara-belona. Tsikaritra ho misy mamily ny fampiharana ny politikan’ny fampihavanana, tsy ho araka ny sitrapon’Andriamanitra. Fampihavanana mitaky...
Nanoratra : R. Herménégilde